Yonke into ekufuneka uyazi malunga nentlanzi ramirezi | Ngeentlanzi
Namhlanje siza kuthetha ngohlobo lweentlanzi kwi-aquarium yethu evela eMzantsi Melika, eColombia naseVenezuela. Imalunga nayo Intlanzi yeCichlid yaseRamirez (UPapiliochromis Ramirezi o Imicrogeophagus ramirezi).
Ezi ntlanzi zinomdla kwaye zinemibala nangona zinokuba neengxaki zokuziphatha xa kuthelekiswa nezinye iintlanzi onazo kwi-aquarium. Ngaba uyafuna ukwazi yonke into ngezi ntlanzi kwi-aquarium yakho?
1 Idatha yeRamirezi
2 Iimpawu zeRamizeri
3 Ukuziphatha kunye nokuhambelana
4 Indawo yokuhlala yendalo yaseRamizeri
5 Izidingo kwi-aquarium
7 Umahluko phakathi kwesini
8 Ukutya kunye namaxabiso
Ezi ntlanzi zezokulandelelana kwee-perciformes kunye nosapho lwe-cichlid. Le ntlanzi inamakhono okuqubha angaphantsi kakhulu xa kuthelekiswa nezinye iintlanzi. Banobungakanani bommandla, kodwa abanabundlobongela.
Ngokumalunga nokubonakala kwayo, yintlanzi eyenziwe ngesitayile enemibala eqaqambileyo kwaye banempawu ezininzi phakathi kwamalungu ohlobo olunye. Yintlanzi ethe-ethe kakhulu ukwahluka kwemichiza emanzini (njengongcoliseko). Oku kwenza ukuba ukugcinwa kwentlanzi kube nzima, kuba umgangatho wamanzi ahlala kuwo kufuneka ujongwe ngononophelo kwaye rhoqo. Ubomi bale ntlanzi bufutshane kakhulu: ihlala ihlala i-2 ukuya kwi-3 iminyaka.
Umzimba we-ramizeri uphuzi kunye nemigca emnyama emnyama okanye emdaka. Ezinye zinamabala emzimbeni wonke kwaye ziluhlaza ngombala. Inqaku elinye elibenza bahluke kwabanye kukuba banemigca emnyama emileyo ewela iliso. Iintlanzi zimalunga ne-7,5 cm ubude.
Isiphelo salo mqolo sale ntlanzi siphezulu ekuqaleni nasekupheleni, ngokungafaniyo nezinye iintlanzi. Xa isiphelo sifikelela esiphelweni sithatha imilo yomthi kunye nabokuqala abathathu abamnyama. I-dimorphism yesondo ayichazwanga kakuhle UPapiliochromis Ramirezi, ayiyinkulu njengakwezinye ii-cichlids ezincinci. Ngokubanzi abantu ababhinqileyo IMicrogeophagus Ramirezi zincinci kuneenkunzi kwaye zinesisu esipinki.
Ayizizo zonke iintlanzi zeramirezi ezinombala ofanayo. Kukho iintlobo ezahlukeneyo apho sifumana ezi zegolide, iialbino, ezinye zinamaphiko aneemilo ezahlukeneyo, nangona ezona ntlobo zininzi zizezasendle.
Ezi ntlanzi, njengoko bekutshiwo ngaphambili, zinobungakanani bendawo, nangona zinoxolo. Ngokufanelekileyo, gcina isibini kwii-aquariums ezincinci kwaye uzidibanise nezinye iintlanzi ezincinci ezikuluhlu oluphezulu. Nangona ziindawo, azibonisi ubundlongondlongo, kodwa zihlala zigcinwa kwindawo yazo yokuhlala, zithatha uhambo olunqabileyo kwindawo esezantsi naphakathi embindini we-aquarium. Azihlali ziphakama ngaphezulu, ngaphandle kwaxa zondla.
Ixesha lokuba baziphathe ngendlela yomhlaba kuxa bebancinci, njengezona zininzi iiicichlids. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, enye yeempawu ezenza ukuba ikhetheke kukuba ngaphakathi kosapho lwe-cichlid, yenye yezona ziphilayo zide. Bahlala kuphela iminyaka emibini okanye emithathu. Kuya kufuneka kukhunjulwe ukuba xa kuthengwa evenkileni, sele benonyaka ubuncinci ubudala, ke ixesha lezi ntlanzi kwi-aquarium lifutshane.
Ukwahlula amadoda kwabasetyhini kufuneka siqaphele ukuba abantu ababhinqileyo zihlala zincinci kunamadoda kwaye zinomzimba ojikeleze ngakumbi. Ukongeza, imitha yokuqala yomphetho wamva yinde emadodeni.
Indawo yokuhlala yendalo yaseRamizeri
Ezi ntlanzi zivela kwi- ICentral Orinoco phakathi kweColombia neVenezuela. Kule milambo kuhlala kukho uhlaza oluninzi kunye neendawo ezinomthunzi ngokungafaniyo ezikwiindawo apho kukho indawo yokuqubha. Ukuba sifuna ukuba nabo kwi-aquarium, kufuneka siyilungiselele ngeenkuni kunye namatye ayivumelayo ukuba iphawule umhlaba apho zisetyenziswa khona endle.
Kufuneka kukhunjulwe ukuba olu didi lubuthathaka kutshintsho lobushushu kunye nokwenziwa kwamachiza emanzini. Ke ukuba amaqondo obushushu e-aquarium ayatshintsha okanye aqala ukungcoliseka kukusilela kwesihluzi okanye iiarhente zangaphandle, ezi ntlanzi ziya kuqala ukonakala.
Ukuze ezi ntlanzi zikwazi ukuhlala kwiimeko ezifanelekileyo, umthamo wamanzi malunga Iilitha ezingama-40 kwisibini ngasinye. Kuba abesilisa banobundlongondlongo ngakumbi kunabasetyhini kwaye banciphisa indawo enkulu, umthamo onjalo wamanzi uyimfuneko. Ukuze amabhinqa azive ekhuselekile ngakumbi, indawo yokufihla kufuneka ibekelwe owasetyhini ngamnye kwindawo nganye. Ukongeza, ezi ndawo zokufihla zisebenza ngakumbi ukuba zisasazwa kwi-aquarium yonke.
Kwelinye icala, ezi ntlanzi zibuthathaka kakhulu kukujoliswa kwe nitrate kwindalo esingqongileyo kwaye abanako ukuhlala ngokuxinana kwe-10mg / l. Oku kubalulekile ukuba kuthathelwe ingqalelo ukuba sinezityalo zendalo kwi-aquarium kwaye sifuna ukuzichumisa.
Nje ukuba izibini zenziwe, baya kuyikhusela indawo kunye, ukuze inkunzi ingaziphathi njengobundlongondlongo.
Kuyacetyiswa ukuba ubeke isityalo esixineneyo kwindawo esecaleni, kunye nezityalo ezisezantsi kwimimandla embindini we-aquarium, emiqolombeni nakwiindawo zokufihla ezenziwe ngamatye, izingodo kunye neengcambu.
I-Ramirezi yintlanzi yodwa, oko kukuthi, badibana nomntu obhinqileyo kwaye bahlala kunye naye, ngokuchaseneyo. Ukuzaliswa kuyafana nokwezinye ii-cichlids. Inomda wommandla okhuselwa zimbini (eyindoda ihlala isebenza ngendlela enoburharha kwaye izama ukukhusela umhlaba ongaphezulu). Baya kuba nobundlobongela kuphela xa enye intlanzi isondela kakhulu kummandla wakho. Ngaphakathi kommandla abanciphisa kuwo, babeka indawo efanelekileyo yokubeka amaqanda. Ukwenza oku, balungisa indawo ngokubeka ilitye elisicaba, iseti yamatye, okanye bembe umngxunya ukuze ube negrabile ukukhusela amaqanda. Indawo yokubeka iya kucocwa ngocoselelo, emva koko owasetyhini uya kugcina imiqolo yamaqanda okuncamathisela ukuba indoda idibanise kwangoko. Nangona ukufuya kunokwenziwa kwindawo enamanzi oluntu, kukho itanki ekhethekileyo. Ukunyanzela ukufuya kufuneka sibeke Ph ngezantsi kwe-7 malunga ne-6,5, amaxabiso onokujonga nge umgangatho wemitha yamanzi ye-aquarium.
Umthamo wamanzi ofunwa yile tanki kukuqanduselwa kunye nesibini malunga neelitha ezingama-50. Indawo efanelekileyo yokukhathalela ulutsha iya kulungiswa kwaye yonke enye i-aquarium iya kusala simahla ukuba badade. Ubushushu bamanzi buya kuba ngama-26 ° - 27 ° C. Bobabini abazali bayakukhathalela ukubekwa, kodwa kukho umngcipheko wokuba baya kuwatya amaqanda, kwaye kuba ukhathalelo lwabazali alubalulekanga kwimpumelelo yokuzala, banokususwa ukuba banqwenela njalo.
Umfazi angafaka phakathi kwamaqanda angama-300 ukuya kuma-400, nangona ingengabo bonke abazalwayo okanye abasindayo. Nje ukuba amaqanda abekwe, athatha malunga neentsuku ezine ukuqanduselwa. Kwiintsuku ezisi-4, ukubuyiselwa kwakhona kwe-yolk sac kwaye iintlanzi zinokondliwa nge-brine shrimp nauplii. Njengoko i-fry iqala ukondla, baya kuzimela ngakumbi bade abazali bayeke ukubanyamekela, ngeli xesha kunokwenzeka ukuba bakulungele ukuzala okutsha.
Ngokukhula kwefry, banokunikwa okunye ukutya okufana nemibungu yengcongconi ebomvu ebomvu, okunye ukutya okusongelweyo kunye nokutya okungumgubo. U-LIifry zikhula kancinci, kuba ubomi bayo bufutshane kwaye phantse isinye kwisithathu sayo siqhotsiwe.
Ukuze i-fry ikhule ngcono kwaye ikwimeko entle, amanzi kufuneka angabinayo i-nitrites kunye ne-nitrate. Kananjalo, ukubenza bakhule ngokukhawuleza, banokutyiswa rhoqo, kodwa kuncinci. Amadoda akhula ngokukhawuleza kunamabhinqa, ngokusisiseko kuba nawo afikelela kubungakanani obukhulu babantu abadala.
Umahluko phakathi kwesini
Amadoda anombala ongqongqo ngakumbi kunowasetyhini kunye nobukhulu obukhulu. Irediyasi yesibini ye-dorsal fin ihlala inde phakathi kwamadoda. Abafazi bahlala behlukaniswa ubomvu besisu kunye nokuba nomzimba ojikeleze ngakumbi (Phakathi iisampulu abaselula kunzima kakhulu ukwahlula kubo). Phambi kokuzala umntu obhinqileyo uyaziwa njenge-ovipositor emfutshane.
Ukutya kunye namaxabiso
Ukutyisa akuyomfuneko ukwenza nzima, kuba ezi ntlanzi zitya phantse yonke into. Ungayinika izikali, ukutya, ukutya okwahlukileyo ... Ukutya okwahlukeneyo abakutyayo iya kuba nefuthe ekukhuleni kwabo, ukukhula kunye nokuziphatha kwabo.
Ixabiso lokuthenga kwiivenkile lijikeleze i-euro ezingama-6. Incinci kwaye inemibala ngakumbi, ixabiso liphezulu. Igolide ramirezi zibiza i-euro ezingama-50, kodwa kuba unokuba neqabane elinye kuphela, akubizi kakhulu.
Njengoko ubona, ezi ntlanzi zikhetheke ngokukodwa kwaye zahlukile ukuthenga kwi-aquarium yethu. Imiba eyahlukeneyo kufuneka ithathelwe ingqalelo, njengobushushu be-aquarium, iimpawu zamachiza emanzini (thintela ungcoliseko, coca izihluzo ngamaxesha athile, kwaye usebenzise iintlanzi ezicocekileyo), kunye nobume beentlanzi. Ukuba baziva besoyikiswa okanye ezinye iintlanzi zoxolo nezinobubele zisondela kwindawo yabo okanye kwindawo yabo yokulala, baya kubahlasela.
Kuzo zonke iimpawu zayo, ezi ntlanzi zinemibala kwaye zinoxolo zilungele i-aquarium yethu kwaye ziyinike umbala omibalabala owahlukileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » URamirezi
UMarcelo oviedo sitsho
Inyani yile yokuba intle kakhulu kwaye ivakaliswe ngokufanelekileyo, ndiyifumene iluncedo kakhulu. Ekuphela kwento endinokuyongeza ukuyenza ifezeke yintlobo ekwabelana ngendawo yendalo kwaye inokwabelwana ngayo yi-aquarium kunye ne-ramirezi ...
Ndingathanda ukuba uphendule umbuzo wam / inkxalabo yam!
Phendula uMarcelo Oviedo